ဗဟုသုတများ – Everybody Read TChen
Addy Chen said…
မောင်တေဇာ နောက်ဆုံး အကြောင်း က မြန်မာလို နဲ့အီး လို ကွန်ထရာဒစ်နေလားလို့ April 25, 2011 9:39 AM
တေဇာ (လရောင်လမ်း) said…
ဒီလိုဝါကျမျိုးကျတော့ `မကြိုးစားသေးတဲ့အထိ´ (ဒါမှမဟုတ်) `မကြိုးစားမချင်း´ လို့ Negative နဲ့ မြန်မာလို ဖလှယ်မှပဲ အဆင်ပြေတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒါက ရှေ့မှာ Negative (don’t know) ပါနေလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကဗျာက Present Continuous ကိုတော့ will ပြောင်းလိုက်တယ်ဗျာ။ အမြင်မတော်တာရှိရင် နည်းနည်းထောက်ပါ တီချမ်း၊ ကျွန်တော်လည်း သိသလောက်နဲ့ လျှောက်ရေးတယ်။း) April 25, 2011 6:15 PM
i had my hair cut ဆိုမှ သဒ္ဒါ အရမှန်မယ်လေ အခုနောက်ပိုင်း တော့ တီတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ က အမေရိကန် အီး အပျက်တွေ ပဲ သုံးတာများနေတာလဲပါတယ် ခုနောက်ပိုင်းပိုဆိုးတယ် အမေရိကန် ရုပ်ရှင်တွေမှာ အမဲကောင်တွေက စကားပြောရင် he don’t she don’t တွေ တောင်လာတယ်
ပြန်ဆွေးနွေးကြည့်တယ် လို့ ပညာရှိချင်ယောင်ဆောင် (ဟန်ဆောင်) ပြီး ရေးသေးတယ် April 26, 2011 10:50 AM
ကျေးဇူး တီချမ်းး) April 26, 2011 2:50 PM
i think this isagood conversation and i think it will benefits some people at least, see i am being proud again… April 26, 2011 3:55 PM
Why not? T chan. I agree. 🙂 April 26, 2011 4:16 PM
အိုကေ နော် အဲ့တာဆို လုပ်ချလိုက်တော့မယ် April 27, 2011 9:09 AM
Posted on April 29, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဗဟုသုတများ2 Comments on လရောင်လမ်း နှင့် အခင်းဖြစ်ပွားခြင်း
ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ မသူတော်ရဲ့ ကွန်မန့်ပါ လင့်ခ် က နတ္ထိပါ သတ္တိရှိတာဒီလို တီလဲစာဖတ်သူတွေကို အားနာလို့ မတင်တော့ဘူး စိတ်ကူးပါတယ် ဒါပေမယ့် အောက်တန်းကျတယ်ဆိုတာ ဒီလိုပါလား လို့ သိအောင်ပါ (ထည့်တာတောင် ဗဟုသုတများ ဆိုတဲ့ Category မှာထည့်ပေးထားပါတယ် ဒါလဲယူတတ်ရင် ဗဟုသုတပါပဲ လောကမှာ ဒီလိုစိတ်ဓါတ်နိမ့်ကျနေတဲ့ လူတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာ သိလာတာပေါ့) ယောက်ျားထုနဲ့ ချီပြီးမပြောချင်ပါဘူး ယောက်ျားကောင်းတွေအများကြီးရှိတော့ မသူတော်တကောင် ကြောင့် တလှေလုံးပုပ် မပြောချင်တာပါ english လိုတော့ worm လို့သာသာကလေးသုံးပါတယ် လူထက်နိမ့်ကျတဲ့အကောင်မျိုးကို ပြောတာပေါ့…ဒီလောက်ပါပဲ ဘာပဲပြောပြော အစဉ်တစိုက်အမြဲမနေနိုင်မထိုင်လာရောက်အားပေးနေတဲ့ မသူတော် ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကြံဖန်တင်တတ်ရင်တော့ ရတာပါပဲ ငြိမ်းချမ်းတာပေါ့………..
ဒီစာကို ဖတ်တော့မှ တီချမ်းဆိုတဲ့ အခြောက်မဟာ အရပ်ပျက်မလောက်တောင် အဆင့်အတန်းမရှိတာ ပို သေချာတယ်။လီးတကာလိုက်စုပ်၊ လူတကာ ဖင်လိုက်ခံနေတာ ခောတ်မှီတယ်လို့ ထင်တဲ့သူတွေက ရှိသေး။ အံ့ရောဗျာ……တစ်ည လီးတစ်ချောင်းမှ ပါးစပ်ထဲ၊ ဖင်ထဲ မ၀င်ရ မနေနိုင်တဲ့သူ.. ဒီရောဂါရတာ မဆန်းပါဘူး။အခြောက်မနှင့် သူ၏ ယောက်ျားမမှန်သော လင် (တစ်ဖင်ခံ)များ..ဖတ်ရတာ လောကကြီးအကြောင်း ပိုသိလာတဲ့သူက ရှိသေးဗျာ။ ညံ့ချက်…။လောကကြီးမှာ ယောက်ျားကောင်း၊ မိန်းမကောင်း၊ ကျားမဟုတ် မ မဟုတ် ပေမဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတဲ့ သူတွေ အများကြီး ရှိနေတာ မမြင်မတွေ့ရအောင် အကုသိုလ်တွေ ဖိစီးနေကြပုံများတော့ကွာ….တယ်…..တောက်……ပြောရင် ငသူတော် လွန်ရာကျမယ်
Posted on December 3, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဗဟုသုတများ13 Comments on အောက်တန်းကျတယ်ဆိုတာ ဒီလို
Posted on July 16, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဗဟုသုတများ5 Comments on ကုထုံးကျရှူံးခြင်းကို နားလည်ခြင်း